Kulan Magaalada Istanbul ku yeesheen Dr Aweys Amiin iyo Masuuliyiin & Ganacsato Turki ah + Sawiro – idalenews.com
Kulan Magaalada Istanbul ku yeesheen Dr Aweys Amiin iyo Masuuliyiin & Ganacsato Turki ah + Sawiro
Dr. Aweys Sheekh Mohiyadin Amin oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Turkiga ayaa kulamo isdaba jooga la lahaa ganacsato iyo masuuliyiin ka tirsan shirkado waaweyn iyo madax ka socota rugta ganacsiga dalkaasi. Dr Aweys ayaa Kulankii ugu dambeeyay la qaatay madax ka tirsan Foreign Economic Relation Board, shirkadaha dharka (Textile) iyo kuwa qaabilsan wax soo saarka beeraha.
Aweys Amin oo uu wehliyo Eng Hashim Abdullahi Abdi ayaa si aad ah loogu soo dhaweeyey xarunta shirka ganacsiga ee magaalada Istanbul, waxayna dhamaan madaxdii ay la kulmeen kala hadleen arimo fara badan oo ay ka mid yihiin iskaashi ganacsi furan oo dhex mara labada dhinac iyo sidii loo hor marin karo Private sectors dalka Soomaaliya iyo dib usoo nooleynta warshadaha yar yar oo wax badan ka bedeli kara nolosha dadka soomaaliyeed isla markaasna dhaqaalaha dalka sare u qaadi kara.
Jawiga kulankaa Dr. Aweys Amin uu la yeeshey dhamaan masuuliyiinta ganacsiga dalka Turkiga oo ahaa mid aad u heer sareeyey ayaa ku dhamaadey guul iyo is afgarad, waxaana labada dhinac wada gaareen heshiisyo iskaashi iyo ganacsi furan isla markaasna sidoo kale ku balamey in la joogtooyo kulamada noocaan oo kala ah si loo xoojiyo xiriirka iskaashi ee labada geesood.
Madaxweynaha Soomaaliya oo shir Jaraa’id isugu yeeray Saxaafada gudaha iyo dibada xarunta Madaxtooyada
Madaxweyne Xasan oo soo dhaweeyey xilka qaadista R/W Saacid, go’aanka barlamaankana ku tilmaamay badbaadin qaran